[Muhiim] Ogeysiisyada iyo Codsiyada Soo-booqdayaasha (La Xiriira Cudurada Infekshinka ee Coronavirus) | Ururka Dhiirrigelinta Dhaqanka Ota Ward
[Muhiim] Ogeysiisyo iyo codsiyo ku socda dhammaan martida (oo laxiriira infekshinka cusub ee coronavirus)
Ka socda ururka
JaaliyadFagaaraha CitizenAplicoKaymaha dhaqanka
Xarumaha ay maamusho oo ay maamusho Ururka Dhiirrigelinta Dhaqanka ee Ota Ward (Ota Ward Plaza, Ota Ward Hall Aplico, Ota Bunkanomori), Wasaaradda Caafimaadka, Shaqada iyo Daryeelka iyo Ota Ward waxay faafinayaan macluumaad ku saabsan cudurka cusub ee coronavirus. Xogta ugu dambeysa, waxaan si dhow isha ugu haynaa ka hortagga infekshinka iyo faafitaanka ka hortagga, waxaanna qaadnaa tallaabooyinka soo socda.
Waxaan kaa codsaneynaa fahankaaga iyo wada shaqeyntaada si loo ilaaliyo caafimaadka dhamaan dadka soo booqda lagana hortago faafida cudurka.
Dadaallada ka hortagga infekshinka
Aalkolada xoqida waxaa lagu rakibay qaybaha kala duwan ee dhismaha, saabuun dareere ahna waxaa lagu rakibay qol kasta oo lagu maydho.Fadlan u isticmaal sida ugu habboon.
Gudaha dhismaha, waxaan ku qaadnaa jeermiska jeermiska ilaalo dhowr jeer maalin kasta annagoo isticmaaleyna kiimikooyin la qasay.
Shaqaalaha la soo xiriira macaamiisha, waxaan u xiran doonaa waji-shareer si loo hago oo aan uga jawaabno.
Boodhadh iftiiminaya oo ku saabsan dhaqidda gacmaha iyo aadaabta qufaca ayaa lagu dhajiyay hoolka.
Haddii aad leedahay astaamo u eg hargab, fadlan ka fogow booqashada matxafka.
Fadlan iskaashi ku samee xirashada maaskaro sida ugu macquulsan hoolka.
Haddii aad qufacdo ama hindhiso, fadlan iskaashi la yeelo "aadaabta qufaca" ee afkaaga ku daboosha maaskarada, maro-gacmeed, cadka, gudaha jaakaddaada iyo gacmo-gashiyada.
Sax habka gacmo dhaqashada
Ku saabsan anshaxa qufaca
Ku saabsan qabashada bandhigyada, iwm.
Marka laga hadlayo bandhigyada ay qabanqaabisay ururkan, waxaa la go'aamiyay in la joojiyo ama dib loo dhigo qaar ka mid ah.Waxay kuxirantahay jawaabta iyo tilmaamaha wadanka iyo Ota Ward, bandhigyada laga yaabo in la joojiyo ama dib loo dhigo ayaa dhici kara mustaqbalka.Waxaan kula socodsiin doonaa xaalada cusub ee degelkeena iyo xisaabta rasmiga ah ee Twitter, markaa fadlan hubi haddii aad qorsheyneyso inaad na soo booqato.
Marka laga hadlayo qabashada bandhigyada iyo shirarka lagu qabto xarun kasta sida goobta lagu qabanayo, waxay ka muuqataa sida ugu macquulsan bogga guriga "XNUMX kalandarka dhacdooyinka dhismaha", laakiin fadlan ka hubso qabanqaabiye kasta macluumaadka ugu dambeeyay.